လက်ရာများနှင့်အကောင်းဆုံးလက်လီရောင်းချမှုအလုပ်အကိုင်များ | USAHello | USAHello
تعرّف على صناعة المبيعات وأنواع مختلفة من المبيعات ووظائف البيع بالتجزئة. اقرأ عن أفضل وظائف المبيعات والمسارات الوظيفية المختلفة التي يمكنك أخذها في المبيعات. သင်လိုအပ်သင်တန်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာဖွေနေစတင်ရန်ရာအရပျနဲ့ပတျသကျတဲ့အထဲက Find.
အရောင်းစတိုးဆိုင်တွင်ကုန်စည်များရောင်းချမှုကနေလူတစ်ဦးရောင်းအားအတွက်ကုမ္ပဏီကိုယ်စားပြုဆိုတဲ့အချက်ကိုမှအရာအားလုံးကိုဆိုလိုတယ်. ၎င်းသည်သင်အိမ်ပြန်လက်ရာမှာအလုပျလုပျဖို့အရောင်းအခွင့်အလမ်းကိုထောက်ပံ့ပေး. အရောင်းဖက်ရှင်ကနေကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု, များစွာသောအခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်အတူထပ်. ဒါဟာယာယီအလုပ်အရောင်းအလုပ်အကိုင်များနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးကိုအရောင်းအလုပ်အကိုင်များများထဲမှတစ်ဦးရာသက်ပန်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနိုင်ပါတယ်.
လက်လီအရောင်းသည်လူများထံသို့တိုက်ရိုက်အမှုအရာရောင်း, ဆိုလိုတာကပါဝင်သည်. လက်လီအရောင်းတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်လူသန်းပေါင်းများစွာ. အဲဒီမှာလက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအဘို့ကြီးစွာသောဝယ်လိုအားအမြဲဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အဲဒီအလုပ်အကိုင်များကိုအမြဲကောင်းစွာ-paid ကြသည်မဟုတ်. اقرأ معلومات الحكومة والإحصاءات حول مهن المبيعات.
تتضمن المبيعات أيضاً المبيعات من صانع الأشياء إلى البائع ، مثل المتجر. ဒါဟာအစတွေဖြစ်တဲ့ဆေးရုံအဖြစ်အကြီးအအသုံးပြုသူဖြစ်နိုင်ပါတယ်. ဒါဟာအစထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာနှင့်အာမခံအဖြစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချရန်လည်းပါဝင်သည်.
အရောင်းလက်ထောက် – စတိုးဆိုင်များတွင်အလုပ်ကောင်းတစ်ခုရေတိုရေရှည်၏အလုပ်သို့မဟုတ်နည်းနည်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံကိုမရှိဘဲယာယီဖြစ်ပါသည်. ပွင့်လင်းနေရာလွတ်အမြဲရှိပါတယ်.
ငှေကိုငျစာရေး – အဆိုပါထပ်တလဲလဲတာဝန်များကိုစိတ်ထဲမထားဘူးသူတစ်ဦးအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအလုပ်. သငျသညျကြာရှည်စွာရပ်တည်ခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များနှင့်အတူဖော်ရွေသဘောတူညီမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်.
ဖုန်းဖြင့်အရောင်း – မိုဘိုင်းဖုန်းအရောင်းအိမ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေးသည်ပေမယ့်အကောင်းတစ်ဦးလစာရရှိရန်ခက်ခဲဖြစ်မည်အကြောင်း.
ဆေးဝါးအရောင်းကိုယ်စားလှယ် – ဆေးဝါးများနှင့်ဆေးဝါးပစ္စည်းကိရိယာများ function ကိုရောင်း paid ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အပြိုင်အဆိုင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြတယ်. ဤသည်ဧရိယာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၏လယ်ပြင်တွင်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အသိပညာလိုအပ်ပါတယ်.
နည်းပညာအရောင်းကိုယ်စားလှယ် – မိုက်ကရိုဆော့ဖ, IBM, Adobe က, Sellsvors အများအပြားနည်းပညာတို့တွင်ကျွမ်းကျင်မှုကုမ္ပဏီများမှရှိသည်သောအရောင်းကိုယ်စားလှယ်များမှမြင့်မားသောလုပ်ခရောင်းအားနှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အရာပူဇော်သက္ကာကို.
အရောင်း Manager ကို – အရောင်း Manager ကိုအသင်းခေါင်းဆောင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်လုပ်ဆောင်နေဖြစ်ပါတယ်
.အာမခံအရောင်း – လူတွေကသူတို့ကိုရောင်းဖို့အကြံပြုသလောက်ကောင်းမွန်သောအာမခံအရောင်းစာရေး. အာမခံအရောင်းပြည်နယ်၏သင်တန်းနှင့်လိုင်စင်လိုအပ်.
အိမ်ခြံမြေ – အိမ်ခြံမြေရောင်းပိုက်ဆံတွေအများကြီးဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်းပေမယ့်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်အကွက်ဖြစ်၏. အိမ်ခြံမြေပွဲစားများနှင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များအစိုးရလိုင်စင်နှင့်ပညတ္တိကျမ်းနှင့် ပတ်သက်. အသိပညာတွေအများကြီးလိုအပ်.
အွန်လိုင်းအရောင်း – အွန်လိုင်းထုတ်ကုန်ရောင်းချခြင်းတစ်စုံတစ်ဦးကမိမိအဘို့အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးကိုလယ်ဖြစ်ပါသည်.
Advertising ကြော်ငြာအရောင်း – ကုမ္ပဏီများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအဘို့ကြော်ငြာကိုရောင်းမယ့် function ကိုမကြာခဏဖုန်းဖြင့်ပြုသောအမှုသည်. အွန်လိုင်းကြော်ငြာလုပ်ငန်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နှင့် e-Commerce ၏အထူးပြုအသိပညာလိုအပ်ပါတယ်.
လူတိုင်းမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရောင်းအားရှိပါတယ်! အရောင်းလုပ်ငန်းဆောင်တာကလူ fit နှင့်ဖော်ရွေလူတစ်ဦး, ယဉ်ကျေးများနှင့်ရှာဖွေ Install လုပ်နိင်ဖြစ်. ယုံကြည်စိတ်ချသငျသညျကလူလာအောင်မှာကောင်းသောနေဆိုလိုတယ်. သငျသညျသူတို့လိုချင်တဲ့အရာကိုသိပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာဖောက်သည်, ဤသူသည်သင်တို့ကောင်းစွာလွှဲအပ်စေမည်ဟုနေကြတယ်ဆိုတာကိုနားထောင်ပါ.
လူတွေသင်၏အသက်တာတွင်အခြားအမှုအရာအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့အဘို့ဖုန်းကို function ကိုမှတဆင့် Ooualembaat လက်လီရောင်းချမှုအတွက်အရောင်းဂျော့ဘ်သည်ကောင်း. تتيح لك مبيعات الهاتف العمل في المنزل تعرّف على المزيد من المعلومات حول الملف الشخصي لمندوب مبيعات التجزئة من Career Onestop.، وتسمح لك وظائف البيع بالتجزئة العمل في نوبات عمل.
သငျသညျကြိုတင်အတွေ့အကြုံကိုမရှိဘဲအလုပ်တစ်ခုလက်လီသို့မဟုတ်ဖုန်းအရောင်း function ကိုရနိုင်ပေမယ့်သင်ပိုကောင်းအလုပ်အကိုင်များအရောင်းအဘို့အကောင်းတစ်ဦးအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်. ဤအအလုပ်အကိုင်များများစွာသောအဘို့, အလုပ်ရှင်များ၎င်းတို့၏စနစ်များကိုအသုံးပြုရန်သင့်အားလေ့ကျင့်ပါလိမ့်မယ်.
အခြားအရောင်းအားအလုပ်အကိုင်များယခင်ကနေကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံအားလိုအပ်. မကြာခဏအရောင်းမန်နေဂျာများနှင့်တက္ကသိုလ်ဒီဂရီ၏အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ဘွဲ့ / ဘွဲ့အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ.
အရောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အခြားလမ်းကြောင်းရှိပါသည်သင့်ရဲ့သွားရာလမ်းပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျတခုလက်ထောက်အရောင်းသို့မဟုတ်ဖုန်းအရောင်းအဖြစ်စတင်နိုင်ပါသည်, သို့သော်သင်အဖြစ်မကြာမီသငျသညျအခြို့သောအတှေ့အကွုံရောင်းအားအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသထားပါတယ်ရှိသည်အဖြစ်သင့်ကုမ္ပဏီအတွင်းပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်နှင့်အတူအလုပ်အကိုင်အခွင့်အများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်.
အတော်များများကအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်များအရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အတန်းပူဇော်. သူတို့ကအသစ်ရောက်ရှိလာသောကျောင်းသားများနှင့်အင်္ဂလိပ်များအတွက်အထူးအတန်းရှိစေခြင်းငှါ. သငျသညျအနီးအသိုင်းအဝိုင်းကောလိပ်ရှာရန်.
သငျသညျဖို့လိုအပ်ပါသလား GED ®?
သငျသညျရှိဒေသခံအလုပ်စင်တာကိုသုံးပါ: တိုင်းအခမဲ့မွို့၌အစိုးရအလုပ်အကိုင်စင်တာများ. အကွံဉာဏျပေးနှင့်ဒေသခံအလုပ်အကိုင်များများစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်. သူတို့ကအလုပ်၏ CVs နှင့်ပုံစံများကိုကူညီပေးနေကြပါသည်. ဒါဟာအလုပ်အကိုင်နှင့်ပညာရေးအပေါ်သင်တန်းသင်၏ပြေစာ၌သင်တို့ကိုကူညီနိုငျ. အနီးဆုံးအလုပ်အကိုင် Center ကရှာဖွေပါ .
: အွန်လိုင်းရှာရန် Salesjobs.com ဒါဟာရောင်းအားအလုပ်အကိုင်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုအထူးပြုအလုပ်တစ်ခု site ကိုဖြစ်ပါတယ်